Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2011 (9)
Q and A September 2011 (9)
၁။ ကျားအဂါင်္မှာ အသီးသေးသေးလေး နှစ်ခု
၂။ I wanna know something about Viagra
၃။ Vagina အဝမှာ အသားတစ်လေးတစ်ခုက
၄။ သမီး သွားအရမ်းနာနေလို့ပါ။
၅။ မူးယစ်ဆေး စွဲနေလို့
၇။ English လို ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်သက်၍
၈။ စီလီကွန်ထိုးထည့်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက်
၉။ ဘယ်အချိန်တွေ သောက်ရမလဲ။
၁ဝ။ IVF နဲ့ ကလေးယူမလို့ ရှိတယ်။
ကျွန်တော့်နာမည် (့) ပါ။ (့) မှာ နေပါတယ်။ အသက်ကတော့ ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျားအဂါင်္မှာ အသီးသေးသေးလေး နှစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပေါ်အရေခွံမှာ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ အတွင်း (ကန်တော့ပါဆရာ) (့) အောက်နားလေးမှာတစ်ခု၊ မှိုဖူး မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တစ်ခုပါ။ အဲဒီအသီးလေးတွေဖြစ်တာ ၅ ရက်လောက်တော့ရှိပါပြီ။ အဲဒါ စိုးရိမ်လို့ စိုးရိမ်စရာရှိ/မရှိနှင့် မည်သည့် ဆေးဝါးသုံးစွဲလျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်းအား ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ဆေးဝါးရှိလျှင် ဆေးအမည်နှင့် ဝယ်ယူရနိုင်သည့်ဆိုင်၊ ဆေး၏ဈေးနှုန်းတို့အား ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။
နာသလား။ ယားသလား။ အရောင်။ လိင်ဆက်ဆံတာ ရှိဘူးသလား။ ကြွက်နို့လို့ ထင်သလား။
Sep 26, 2011 at 11:40 AM,
I wanna know something about Viagra that I don’t know clearly. How many medicines (doses) does it have? How many medicines must I take? Just only one medicine? Before making love (45mins), I must take it? Can I buy it here (YGN)? How much is it? Cheap? Plz explain clearly and details.
- Viagra သန်မာစေတဲ့ဆေး
- Viagra in Heart Disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ (ဗိုင်ယာဂရာ) တွေကို ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး ကလေးမွေးထားတာ ၃ လ ရှိပါပြီ၊ ရိုးရိုးမွေးတာပါ။ ကလေးခြားဖို့ ၃ လဆေးထိုးထားပါတယ်။ မွေးပြီးမှ အတူနေတာ ၃၊ ၄ ကြိမ်ရှိပါပြီ။ အတူနေတိုင်းလည်း မိန်းမကိုယ်အဝက အရမ်းနာပါတယ်။ သေသေချာချာကြည့်မိတော့ Vagina အဝမှာ အသားတစ်လေးတစ်ခုက သွေးခြေဥသလိုနီနေပါတယ်။ ဆီးပေါက်ပြီးတိုင်း ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း စပ်နေပါတယ်တဲ့။ တားဆေး ထိုးပြီးကတည်းက ရာသီ အဆက်မပြတ်လာနေလို့ OG နဲ့လည်း ပြန်မပြဖြစ်သေးပါဘူး။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတွေ ဘာတွေကော ဖြစ်နိုင်သလား။ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံဥာဏ်လေးပေးပါ။
ကလေးအမေရဲ့ အသက်၊ ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်မွေးပြီး၊ မွေးတုံးက ချုပ်ရသလား။ နဲနဲဖြစ်ဖြစ် စုပ်ပြဲတာဖြစ်သေးလား။ အရင်ကကော တားဆေး-ထိုးဆေး ထိုးဘူးသလား။ အဖြူဆင်းသလား။ မေးတာတွေ ပြန်မသိရခင် ပြောရရင် ကင်ဆာ မဟုတ်ဘို့ များပါတယ်။
အသက်က (၃ဝ) ပါ၊ သားဦးလေးမွေးတာပါ။ ချုပ်ရပါတယ်။ ချုပ်ရိုးဖြည်တော့ အနာကသိပ်မကျက်ချင်သေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အရင်က တားဆေးမထိုးဖူးပါဘူး။ ရာသီမှန်တဲ့ဆေးနဲ့ တားခဲ့တာပါ။ အဖြူမဆင်းဘူး။
ဒါဆိုရင် လမ်းကြောင်းချဲ့ပြီး ပြန်ချုပ်တဲ့နေရာက အကင်းမသေသေးတာဖြစ်မှာပါ။ တခါတလေ ချုပ်ရိုးစ ထွက်လာတတ်တယ်။ အတွင်းချုပ်ကြိုး၊ အပြင်ချုပ်ကြိုး တခုခုထွက်စရာရှိရင်လဲ နဂိုအနေ မရောက်နိုင်သေးတတ်ဘူး။ ကြိုးစလိုလို စမ်းမိ၊ မြင်မိရင် ပြန်ပြပါ။ အသာလေး ဆွဲထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အနာနဲနဲရင်းသူဆိုရင်လဲ အမာရွတ် ကြီး-မာ နေတတ်တယ်။ ကြာရင် ကောင်းတာပါ။ တားဆေး-ထိုးဆေးက အမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရာသီ နည်းသူက များတယ်။ ရေးထားတဲ့စာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အနာက အကင်းမသေသေးရင်ဘာလုပ်သင့်လဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်လောက်က OG နဲ့ပြတာ လိမ်းဆေး Gel တစ်မျိုးတော့ ပေးလိုက်တယ်။ အနာကျက်ဖို့ အဲ့ဒီလောက် ကြာတတ်လား။ ကလေးမွေးပြီးတာ သုံးလ ရှိပြီ။ ပြန်ချုပ်ဖို့ကော လိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူနေပြီးရင် အင်္ဂါအဝက စပ်ပြီး နာနေလို့ ဆီးသွားရမှာတောင် သူကြောက်နေတယ်။
အနာအကင်းမသေတာ၊ ရင်းတာ နဲ့ ပြန်ချုပ်သင့်တာ တခုခုဖြစ်နေမယ်။ အနာ ရင်းစေမဲ့ ပိုးဝင်တာမျိုးက ပိုးသေဆေးတွေက ကောင်းကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ၁ လဆိုရင် အနာ ကောင်းကောင်းကျက်ရမှာပါ။ ချုပ်ကြိုးကျန်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Muscle အတွင်းသားက Vaginal skin အပြင်မှာ ပေါ်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါမျိုးထင်ရတယ်။ တနေ့ကဘဲ ဆရာ့ဆေးခန်းလေးမှာ အစိုးရဆေးရုံမှာသွားမွေး၊ ချုပ်ပေးထားသူ အဲလိုဖြစ်နေလို့ လာပြတယ်။ ညာဘက်ဘေးမှာ အသားစလိုတွေလို့ ထုတ်ပေးရတယ်။ သူ ဒုတိယတခေါက် ပြန်လာရသေးတယ်။ အခုကောင်းနေပါတယ်။ OG နဲ့ပြတာ ကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်တာပြောပြပါ။ ပြန်ချုပ်ရမှာမျိုးတော့ မဖြစ်လောက်ပါ။
Mon, Sep 26, 2011 at 4:16 PM
သမီး သွားအရမ်းနာနေလို့ပါ။ ကိုက်တာလား နာတာလား သေချာမပြောပြတတ်ဖူး။ သွားအသစ်၊ အံသွားက (အောက်သွား ဘယ်ဖက်) သွားဖုံးကိုထိုးပြီး နာနေတာပါ။ အဲ့ဒီ သွားက ထွက်နေတာ ၁ နှစ်ကျော် ရှိပြီထင်ပါတယ်။ နဲနဲ နဲနဲနဲ့ အခုထိ တဝက်တောင် ပြီးအောင် မထွက်သေးတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ရက်က ညက နိုးလာတော့ အဲ့ဒီ နောက်ဆုံးသွားနေရာမှာ သွေးဖတ်လေးတွေ့တယ်။ သွေးထွက်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တနေရာကနေ သွေးအဖတ်ထွက်လာတာမျိုး။ နောက်ရက်ကျတော့ အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသွား နာနေတဲ့နေရာကို တစ်ရူးကို ၄ ခေါက်ခေါက်ပြီး ထိကြည့်တော့ တစ်ရူးမှာ ပြည်လိုလို အဝါရောင်လေးတွေပါလာတယ်။ အဲ့ဒီသွားကို ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ အရမ်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပုံမျိုး မဟုတ်ဖူး။ ပုံမုန် အတိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် မခံနိုင်အောင် နာနေတယ်။ သွားဆေးခန်းသွား၊ သွားနှုတ်ဖို့ကလည်း နောက် ၁ဝ ရက်လောက်နေမှ သွားနိုင်မှာမို့ အနာသက်သာအောင် ဘာလိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေးတွေ သုံးရမယ်။ ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေ ရှောင်ရမယ် ဆိုတာပြောပြပါလား။ သမီးက စာမေးပွဲ ဖြေနေတာမို့ပါ။ သွားနာနေတာ ကြာပါပြီ။ မခံနိုင်အောင် နာတာတော့ ၃ ရက်၊ ၄ ရက်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သွားနာတာနဲ့အတူ နားပါကိုက်နေပါတယ်။ ၁ ပတ်၊ ၁ ပတ်ကျော်တာင် ရှိပြီထင်ပါတယ်။ မနေ့ညနဲ့ ဒီနေ့ဆို သွားနဲ့ နားတင်မကဘဲ ခေါင်းပါကိုက် နေပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်ရမယ်၊ ဘာ ointment or cream သုံးရမယ် ဆိုတာ ပြောပေးပါရှင့်။
ဆောရီး၊ ဖြေတာ နဲနဲကြာသွားတယ်။ သွားတောင် အတော်ကိုက်နေမယ်ထင်တယ်။
Wisdom teeth အံဆုံးပေါက်တာ တချို့မှာ အတော်ခံရတယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်တာအထိလုပ်ရတတ်တယ်။ လူတိုင်းမဟုတ်ပါ။
Pain နာမယ်။ jaw stiffness မေးလှုပ်မရဖြစ်မယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ်အတွင်းအဖြစ်များတယ်။
အစာအထဲဝင်တာနဲ့ Gum infection ပိုးဝင်တတ်တယ်။
တချို့က Wrong direction လားရာလွဲပေါက်တတ်တယ်။ တချို့မှာ
သွားဖုံးထဲကနေ Impacted wisdom teeth မထွက်လာနိုင်ဘဲနေတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာလဲ အမျိုးအစားကွဲတွေ ရှိတယ်။ Mesioangular impaction (44%), Vertical impaction (38%), Distoangular impaction (6%) နဲ့ Horizontal impaction (3%) ဖြစ်တယ်။
Partial eruption အကုန်မထွက်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
Hydrogen peroxide ဆေးနဲ့ ခံတွင်းကို သန့်ပေးရတယ်။
Infection (အင်ဖက်ရှင်) ဝင်ရင် Pericoronitis ရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။
လိုအပ်ရင် နုတ်ပြစ်ရတယ်။ ဒီသွားမျိုးကိုနုတ်ပြီးရင် တချို့ကို ချုပ်ပေးရတယ်။
23 Sep 11, 11:42
Q: ကျွန်တော် မူးယစ်ဆေး စွဲနေလို့ ဘယ်လိုဖြတ်သင့်လဲဆိုတာ ကူညီပါဆရာ။
A: ဆောရီး။ စာသပ်သပ် မရေးဖြစ်သေးပါ။ ဖြတ်ချင်စိတ်ရှိရင် ဖြတ်လို့ ရပါတယ်။ ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် နဲ့ စနစ်တကျလုပ်ပါ။ စိတ်ကို နိုင်ပါစေ။
25 Sep 11, 19:25
Q: ကျမ သုံးလခံတားဆေး ထိုးထားပါတယ်။ ထိုးပြီးပြီးချင်း လိင်ဆက်ဆံရင် ကလေးရနိုင်ပါသလား။ ထိုးပြီး ဘယ်နှစ်ရက်မှာ စနေလို့ရှိရင် ကိုဝန်မရနိုင်ပါသလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=450:depo-provera-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Depo Provera သုံးလခံ ထိုးဆေး ကိုဖတ်ပါ။
25 Sep 11, 22:24
Q: ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းအပြင် တစ်ခုလုံးကို ဘယ်အရာကို ဘာလိုခေါ်သလဲဆိုတာကို English လို Point လုပ်တဲ့ ရုပ်ပုံနှင့်တကွ ပေးလို့ ရမလား။ English လို ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝမသိလို့။
A: မေးတာကို နားမလည်ပါ။
26 Sep 11, 09:56
Q: ကျားအင်္ဂါကြီးဆေးကို ထိုးဆေးထိုးခြင်းပာာ စီလီကွန်ထိုးထည့်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။ တခြား ဆိုးကျိုးတွေ သိပါရစေ။
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=49 မှာ ရှာဖတ်ပါ။
23 Sep 11, 18:50
Q: ၇ ရက်နေ့ မနက် ၁ဝ နာရီနဲ့ ၁ဝ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီအတွင်း လိင်ဆက်ဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင် emergency contraceptive ကို ဘယ်အချိန်တွေ သောက်ရမလဲ။
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2756:different-methods-of-contraception-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ နဲ့ http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=436:emergency-contraception-2-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Emergency Contraception (2) အရေးပေါ်တားဆေးများ (၂) တွေကိုဖတ်ပါ။
24 Sep 11, 15:32
Q: ဆရာရှင့် ကျမ IVF နဲ့ ကလေးယူမလို့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာတွေပြင်ဆင်းထားရမလဲရှင့်။ ကျမသိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို ဖြေကြားပေပါရှင့်။
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2772:infertility-1-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) နဲ့ http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=453:infertility-2-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Infertility (2) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) တွေကိုဖတ်ပါ။
17 Sep 11, 23:06
Q: ကျွန်တော့် လိင်တံ ထိပ်ဖူးမှာ အနီစက် သေးသေးလေးတွေ ပေါက်နေပါတယ်။ ဘာရောဂါလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ပျောက်အောင် ဘာဆေးလိမ်းရမလဲဆရာ။ ညွှန်ကြားပေးပါ။
A: ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာ ရှိပါက အတိုင်းမေးပါ။
Q and A from C-box September 2011 (2)
၁။ Please suggest me Antibiotic cream
၂။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
၄။ အနံမရှိ၊ ယားယံခြင်းမရှိ။
၅။ Can I take pills for3to4years doctor?
၆။ နှလုံးရောဂါ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
18 Sep 11, 23:56
Q: Please suggest me Antibiotic cream which is suitable for face. Before dermaroller, can I use 70% alcohol to clean my face? I plan to use dermaroller on my face. After dermaroller, I have to use antibiotics cream.
17 Sep 11, 19:47
Q: ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး တကိုယ်လုံး (ခြေ၊ လက်၊ ကိုယ်၊ နဖူး) မှာ အပိန့်တွေလိုမျိုး ထပြီး ယားယံနေတာ ၄ ရက်ခန့်ရှိပါပြီ။ဆေးထိုးတာလဲ မသက်သာပါဘူး။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
A: http://www.yamunaclinic.org/ ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာ ရှိပါက အတိုင်းမေးပါ။
17 Sep 11, 11:48
Q: ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ တိုင်းကိရိယာကို ဘယ်လိုပါသလဲ။ အမည်လေးသိချင်ပါတယ်။
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276:pregnancy-tests-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Pregnancy Tests ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ခြင်း
16 Sep 11, 21:56
Q: ရာသီမလာပဲ အဖြူအများကြီး ဆင်းနေလို့ပါ။ အနံမရှိ၊ ယားယံခြင်းမရှိ။ အိမ်ထောင်သက် ၉ လ။ အတူနေစဉ် ကွန်ဒုံးသုံးပါတယ်။ တားဆေး မသုံးပါ။ ဆီးစစ်ချက်မှာ တလိုင်းသာပေါ်ပါတယ်။
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=433:vaginal-discharge-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း
13 Sep 11, 09:06
Q: I used birth control pills for over2years and I don't want to use it anymore. But I dont know which way is the best way to prevent pregnant. So please tell me which way is the best way. Can I take pills for3to4years doctor?
A: http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2928:faqs-hormonal-birth-control-&catid=30:medic FAQs Hormonal birth control pills ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေး အမေး-အဖြေများ ကို ဖတ်ပါ။
12 Sep 11, 15:07
Q: နှလုံးရောဂါ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်လေးတွေ ပြောပြပါနော်။
A: နှလုံးရောဂါက အမျိုးမျိုး။ အတိအကျ သိချင်တာ တခုကို မေးပါ။ Viagra in Heart Disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ (ဗိုင်ယာဂရာ) နဲ့ Lown–Ganong–Levine syndrome (LGL) နှလုံးခုန်မြန်တဲ့ ရောဂါဆန်း ရေးထားပါတယ်။
12 Sep 11, 13:47
Q: ညီမက သွေးလေးဘက်နာအကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီရောဂါက ဘယ်လိုစဖြစ်တယ် ဘယ်လိုကုသရမယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။
A: မြန်မာလိုခေါ်တဲ့ ရောဂါနာမည်က တနေရာတမျိုးမို့ သိချင်တဲ့ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြောပြပါ။
12 Sep 11, 15:45
Q: ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ညီမသိချင်တာက အဲ့ရောဂါက သွေးလေးကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တတ်ပါသလား။ ညီမ အသိတယောက်က အဲ့ရောဂါဖြစ်နေပါတယ်ခု သူစိတ်တွေက မတည်ငြိမ်တာကို တွေ့နေရပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ရောဂါ က အဲ့ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသလား။ ဆရာ
A: မဟုတ်သေးဘူး။ ဘာရောဂါကို ပြောချင်တာလဲ မသိသေးဘူး။ လေးဘက်နာ ဆိုရင် ရေးထားတာရှာပါ. သွေးလေးဘက်နာ ဆိုတာ ဆရာ မသိပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:13 AM